नेकपाको हिजो बसेको बैठकमा दुबै अध्यक्षका लागी राखिएको सोफा किन हटाईयो? -
२०७७, १३ असार शनिबार ०३:४४ June 27, 2020 clickonLeaveaComment on नेकपाको हिजो बसेको बैठकमा दुबै अध्यक्षका लागी राखिएको सोफा किन हटाईयो?
हिजो प्रधानमन्त्री निबास स्थान बालुवाटारमा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एेउटा अनौठो घटना हुन पुग्यो जहा पार्टीका नेताहरु द्वारा विरोध गरेपछि दुई अध्यक्षका लागि राखिएको सोफा हटाइएको थियो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्नका लागि मञ्चमा सोफा राखिएको थियो । अन्य नेताहरुका लागि कुर्सीको व्यवस्था थियो ।
सोही बैठकमा नेकपाका नेता भीम राववले बैठक कक्षको मञ्चमा दुई अध्यक्षका लागि छुट्टै सोफा राखेको मा प्रश्न गरेका थिए । नेता रावलले कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा कुर्सीमै असमानता भएको भनेर प्रश्न गरेका थिए र सबै को ध्यान आकर्शण गरेका थिए । उक्त लाई सामन्तवादी प्रवृति भएको भन्दै उनले सोफा हटाउन माग गरे । उनले सोफा हटाउन माग गर्दा सबै नेताहरुले ताली बजाएर बिरोधको समर्थन गरेका थिए । त्यसलगत्तै अध्यक्षद्वयका लागि मञ्चमा राखिएका सोफा हटाईएको जानकारी रहेकोछ । त्यसपछि अन्य सदस्यलाई जस्तै अध्यक्षका लागि कुर्सीको व्यवस्था त्यहाँ भएको थियो ।
यस्तै अस्ती बुधबार बसेको बैठकमा पनी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई अध्यक्षभन्दा पछि राखेको भन्दै कार्यालय सचिवलाई आफू बस्ने कुर्सी अगाडि सार्न लगाएका थिए ।
दाङमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी महिलाको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि, नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या २७ पुग्यो
रवि लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमै राखिने
२०७६, ३ भाद्र मंगलवार १७:५२ August 20, 2019 clickon
२०७७, १० असार बुधबार ११:३४ June 24, 2020 clickon
गरिब को त को नै छ र, जाबो एउटा लालपुर्जा पाउन पनी १५ बर्ष कुर्नु पर्ने??
२०७५, ७ माघ सोमबार ०१:५२ January 21, 2019 clickon